फोटोशप कसरी प्रयोग गर्ने: नवोदित डिजाइनरहरूको लागि छोटो ट्यूटोरियल | अनलाइन क्रिएटिभहरू
फोटोशप कसरी प्रयोग गर्ने
नेरिया मोर्सिलो | | डिजाइन उपकरणहरू, Photoshop
पक्कै पनि यदि तपाईं डिजाइनको संसारमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो हातको पछाडि जस्तै फोटोशपलाई थाहा पाउनुहुनेछ। तर जे होस्, सबैलाई यस कार्यक्रमको कार्यहरू थाहा छैन जसले यति धेरै मद्दत प्रदान गरेको छ डिजाइनरहरू। चित्रकार वा फोटोग्राफर।
त्यसकारण, यस ट्यूटोरियलमा, हामी तपाईंलाई एउटा सानो गाइड देखाउन जाँदैछौं ताकि तपाईंले यस कार्यक्रमको बारेमा अझ बढी मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईंको परियोजनाहरू पूरा गर्दा तपाईंलाई ठूलो मद्दत हुनेछ। तल हामी यस उपकरणको बारेमा थप व्याख्या गर्छौं जुन Adobe ले तपाईका लागि र ग्राफिक्स र डिजाइनका प्रेमीहरूका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरेको हो।
1 Photoshop: यो के हो?
1.1 आधारभूत प्रकार्यहरू
2 फोटोशप कागजात खोल्नुहोस्
3.1 कलम उपकरण
3.2 पाठ उपकरण
3.3 ग्रेडियन्ट उपकरण
5 फोटोशपका लागि स्रोतहरू
5.1 डेभियन कला
Photoshop: यो के हो?
फोटोशप एक प्रकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ छवि सफ्टवेयर जहाँ ग्राफिक डिजाइन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो एक उपकरण हो जुन हाल विश्वभरि हजारौं र हजारौं मानिसहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ।
यो तस्बिर सम्पादनसँग मात्र जोडिएको छैन, तर वेब डिजाइन जस्ता उद्देश्यका लागि डिजाइन गर्न सकिन्छ, तर भिडियोहरू सम्पादन गर्न र 3D ग्राफिक्स सिर्जना गर्न पनि काम गर्दछ। यो अनुप्रयोगको बारेमा सायद यो लायक छैन कि फोटोशप नि: शुल्क छैन, तर यो Adobe को भाग भएकोले, तपाईंले मासिक वा वार्षिक प्याक तिर्न आवश्यक छ।
यो एप्लिकेसनले के ग्यारेन्टी दिन्छ कि भुक्तान भए तापनि, तपाईंले प्याक समात्नुभएपछि, तपाईंले आफ्नो Adobe खाता मार्फत एकै समयमा धेरै यन्त्रहरूमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईं विभिन्न स्क्रिनहरू मार्फत एपको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
यस उपकरणको बारेमा थप जान्न सुरु गर्न, यो फोटोशप को आधारभूत कार्यहरू पहिलो हात जान्न आवश्यक छ। तसर्थ, यो चाखलाग्दो छ कि तपाईलाई थाहा छ कि, एकचोटि तपाईले एप्लिकेसन खोल्नुभयो, यसले तपाईलाई देखाउनेछ कि शीर्षमा मुख्य मेनु के हुनेछ।
बायाँ छेउमा तपाईंको स्क्रिनमा साइडबार प्रदर्शित हुनेछ, यो उपकरणपट्टी बारे छ केही उपकरणहरू सहित जसले तपाईंलाई आफ्नो परियोजनाहरू सम्पादन गर्न मद्दत गर्नेछ। अन्तमा, दायाँ छेउमा, तपाईंले देख्नुहुनेछ रंग उपकरण र तह उपकरण।
फोटोशप कागजात खोल्नुहोस्
नयाँ कागजात सिर्जना गर्न वा आफ्नो कम्प्युटरमा फाइल खोल्न, माथि बायाँ मेनुमा "फाइल" मा क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ खाली कागजात सिर्जना गर्न "नयाँ" चयन गर्नुहोस्। वा आफ्नो कम्प्युटर पहुँच गर्न र अवस्थित फाइल खोल्न "खोल्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्।
जब तपाइँ नयाँ कागजात सिर्जना गर्नुहुन्छ, एक संवाद देखा पर्नेछ। यस सञ्झ्यालमा तपाईंले फाइलको नाम र इच्छित साइज र रिजोल्युसन चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपयोगी छ यदि तपाईंको वेबसाइटलाई फोटोहरू ठीकसँग प्रदर्शन गर्न निश्चित फाइल साइज चाहिन्छ। नोट गर्नुहोस् कि सफ्टवेयरले यो नयाँ कागजातलाई "फ्रिज" गर्नेछ, तपाइँलाई त्यो तहमा सिधै परिवर्तनहरू गर्नबाट रोक्न। यसलाई अनलक गर्न, तहको नाममा रहेको लक आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो गायब हुनेछ।
बायाँ साइडबारमा रहेको टूलबक्स तपाईंको सबैभन्दा मिल्ने साथी हुनेछ। उपकरणहरूलाई तिनीहरूले गर्ने कामको आधारमा समूहहरूमा व्यवस्थित गरिएको छ:
शीर्ष खण्डमा चयन, क्रपिङ, र काट्ने उपकरणहरू छन्: तपाईंले सम्पादन गर्न वा परिष्कृत गर्न चाहनुभएको छविहरूको भागहरू चयन गर्न वा तपाईंले बहिष्करण गर्न चाहनुभएको भागहरू क्रप गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। दोस्रो खण्डले परिष्करण र चित्रकारी उपकरणहरू प्रस्तुत गर्दछ: नचाहिने दागहरू हटाउन, छविमा कोर्न, केही भागहरू मेटाउन, यसलाई रंगीन बनाउन, वा तीखो वा धमिलो बनाउन तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
तेस्रो खण्ड रेखाचित्र र टाइपिङ उपकरणहरूमा समर्पित छ: आफ्नो छविमा पाठ लेख्न यी उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा पेन्सिल उपकरणको साथ म्यानुअल रूपमा छविहरू कोर्नुहोस्। प्रत्येक चोटि तपाईंले बायाँ साइडबारमा रहेको कुनै एक उपकरणमा क्लिक गर्दा, तपाईंले माथिको मुख्य मेनुमा उपकरणका विकल्पहरू देख्नुहुनेछ।
पेन उपकरणले तपाईंलाई आफ्नो आकारहरू कोर्न अनुमति दिन्छ। प्रयोग गर्दा, हुनेछ चार फरक विकल्प:
मानक बूम वक्र र सीधा खण्डहरू कोर्न।
वक्रता को सहज रूपमा सीधा र घुमाउरो खण्डहरू कोर्न
स्वतन्त्र कलम स्वतन्त्र रूपमा कोर्न को लागी, मानौं तपाइँ कलम र कागज प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ
चुम्बकीय कलम धेरै परिशुद्धताका लागि निश्चित परिभाषित किनाराहरूको छेउमा स्न्याप गर्ने मार्गहरू कोर्न
पेन आइकनमा क्लिक गरी समातेर र "पेन टूल" भन्ने एउटा छानेर मानक पेन उपकरण चयन गर्नुहोस्। तपाईं टुलबक्स मेनुमा रहेको मुख्य आइकनमा क्लिक गरेर विभिन्न पेन उपकरणहरू मार्फत पनि साइकल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि किबोर्ड सर्टकटको रूपमा "Shift + P" थिच्नुहोस्।
पाठ उपकरणले तपाईंलाई छविमा शब्दहरू लेख्न अनुमति दिन्छ। जब तपाइँ बायाँ उपकरण बाकसमा पाठ उपकरण प्रतिमा होल्ड गर्नुहुन्छ, तपाइँ देख्नुहुनेछ तेर्सो वा ठाडो रूपमा लेख्ने विकल्प। अन्य सबै उपकरणहरू जस्तै, जब तपाइँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, मुख्य मेनुमा थप विकल्पहरू देखा पर्नेछ। तपाईं क्यारेक्टर प्यानल प्रयोग गरेर पनि सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई केही अन्य विकल्पहरू दिन्छ।
ग्रेडियन्ट ए हो दुई वा बढी रङहरू बीच सहज रङ संक्रमण। ग्रेडियन्टहरू फोटोग्राफी वा विज्ञापन उत्पादनहरूको लागि उत्कृष्ट पृष्ठभूमि हुन्। तिनीहरू थोरै रंग र व्यावसायिक रूप थप्न सजिलो तरिका हुन सक्छन्।
तहहरू फोटोशपको आधारभूत तत्व हुन्, तपाईंले काम गर्ने सबै तहहरू मिलेर बनेका छन्। जब तपाइँ धेरै तहहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, बाँकी अन्तिम उत्पादनलाई बर्बाद नगरी छविको एक भाग परिमार्जन गर्न सजिलो हुन्छ।
तपाईं तहहरू थप्न वा हटाउन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग र प्रत्येक तह नामको बाँयामा रहेको आईबल आइकनमा क्लिक गरेर तिनीहरूलाई "लुकाउनुहोस्"। धेरै अवस्थामा, फोटोशपले स्वचालित रूपमा तपाईंको कार्यको लागि नयाँ तह सिर्जना गर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ पृष्ठभूमि छविमा लेख्न वा कागजातमा अर्को छवि टाँस्न पाठ उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, एउटा छुट्टै, अज्ञात तह सिर्जना हुनेछ।
फोटोशपका लागि स्रोतहरू
हामीले तपाईंलाई तल देखाउने स्रोतहरू विभिन्न वेब पृष्ठहरूमा अवस्थित साना टेम्प्लेटहरू हुन् जसले तपाईंलाई तपाईंको परियोजनाहरूका लागि अझ बढी सामग्री प्रदान गर्न सक्छ। ब्रश, भेक्टर आदि कहाँ डाउनलोड गर्ने भनेर जान्न सधैं महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसले तपाइँलाई तपाइँको प्रविधि दिन प्रतिदिन सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
संसारमा कलाकारहरूको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जालले युवा कलाकारहरूलाई उनीहरूका कामहरू देखाउनको लागि मात्र होइन, समुदायका अन्य भागहरूबाट टिप्पणी र आलोचना गर्न पेश गर्दछ, Deviant Art पनि हो। आफ्नो स्रोत साझा गर्न ठाउँ।
सन् 2000 देखि सक्रिय रहेको यस वेबसाइटले आफ्ना धेरै श्रेणिहरू मध्ये एक स्रोत श्रेणी सिर्जना गर्‍यो, जसले संसारभरका कलाकारहरूलाई उनीहरूको स्रोत साझा गर्नको लागि जन्म दिएको छ ताकि अरूले यसलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रयोग गर्न सकून्।
वेब स्रोतहरूको कोटी भित्र त्यहाँ6उपश्रेणीहरू विशेष गरी फोटोशपको लागि नामित छन्: psds, ब्रश, ढाँचा र ढाँचाहरू, कार्यहरू, अनुकूल आकारहरू र रङ प्यालेटहरू।
यद्यपि Deviant Art कुनै स्रोत पृष्ठ होइन, प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्याको अर्थ यो वेबसाइटले दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, कलाकारहरू, ग्राफिक डिजाइनरहरू र आर्किटेक्टहरू, अरूहरूका लागि थप र अधिक नि: शुल्क सामग्री थप्दै।
यदि तपाईंलाई स्रोत कहाँ फेला पार्ने थाहा छैन भने, यसलाई फेला पार्ने तपाईंको उत्तम विकल्प Freepik मार्फत हो। यो वेबसाइट छ संसारमा ग्राफिक स्रोतहरूको सबैभन्दा ठूलो निःशुल्क पुस्तकालयहरू मध्ये एक र, तिनीहरूका अनुसार, तिनीहरू संसारमा ग्राफिक डिजाइनरहरूको सबैभन्दा ठूलो समुदाय पनि हुन्।
जब तपाइँ स्पेनी मूलको यो वेबसाइट र मालागामा मुख्यालय द्वारा ह्यान्डल गरिएको तथ्याङ्कहरू देख्नुहुन्छ तब यी अनुमानहरू धेरै टाढाको छैनन्। 20 मिलियन मासिक भ्रमण संग र Google वा Adobe जस्ता ग्राहकहरू, यो Freepik को असाधारण वृद्धि आश्चर्यजनक छैन।
तर यस वेबसाइटमा सबै कुरा यति राम्रो छैन, तिनीहरू आफैले भने, पृष्ठले फ्रीमियम व्यापार मोडेलसँग काम गर्दछ, त्यो हो, नि: शुल्क तर पूर्ण रूपमा होइन। धेरै जसो स्रोतहरू वेबमा अधिकारहरू एट्रिब्यूट गरेर नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ, तर पूर्ण अनुभव सदस्यताको साथमा छ।
यो एक सरल पृष्ठ हो जहाँ तिनीहरू अवस्थित छन्। Skalgubbar स्वीडेनका वास्तुकला विद्यार्थी, Teodor Javanaud Emdén द्वारा बनाईएको वेबसाइट हो, जसमा उहाँले हामीलाई धेरै परिस्थितिहरूमा मानिसहरूका सयौं क्रप गरिएका छविहरू प्रदान गर्नुहुन्छ।
सबै छविहरू व्यक्तिगत रूपमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ र नि: शुल्क .png ढाँचामा र ठूलो आकार र रिजोल्युसनको साथ। साथै, यदि तपाइँ यी मध्ये कुनै पनि छविहरू प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, ध्यान राख्नुहोस् कि तिनीहरू पूर्ण रूपमा र अनन्य वास्तुकलाको फोटोमोन्टेजहरूमा प्रयोगको लागि मात्र हुन्।
यदि यो सानो गाइड अपर्याप्त वा धेरै छोटो छ भने, याद गर्नुहोस् कि तपाईंले हामीले तपाईंको लागि डिजाइन गरेका केही पोष्टहरू परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरू पनि फोटोशपमा प्रयोग गर्न सकिने स्रोतहरूको अंश हुन्।
यदि तपाइँ भेक्टरहरू, तहहरूसँग काम गर्न आफैलाई समर्पित गर्नुहुन्छ, र सामान्यतया तपाइँलाई ग्राफिक्स र डिजाइनको संसार मनपर्छ, तपाइँ Adobe प्याक किन्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ यो उपकरण समावेश छ।
साथै, यदि तपाइँ थप निःशुल्क उपकरण र स्रोतहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले सिफारिस गरेकाहरूलाई हेर्नुहोस् र तपाइँको रचनात्मकतालाई लिन दिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » फोटोशप कसरी प्रयोग गर्ने
फ्लेक्सोग्राफी के हो?
CorelDraw के हो